American Samoa air service: Gadzirira kumirira mazuva emabhegi ako |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » American Samoa air service: Gadzirira kumirira mazuva ako mabhegi
American Samoa air service: Gadzirira kumirira mazuva ako mabhegi
Gadzirira kumirira mazuva akati wandei kuti mukwende wako usvike.
Gadzirira kumirira mazuva akati wandei kuti mukwende wako usvike. Ndege chete iri kubhururuka pakati peSamoa neAmerican Samoa parizvino iri pasi pekumanikidzwa kukuru pamberi pekugadzwa kwabhishopi wekatorike wenzvimbo iyi gare gare svondo rino.
Inter-Island Air yave isingaiti kwevhiki nekuda kwekugadziriswa kweinjini uye Samoa Air yakamira kubhururuka svondo rapfuura nekuda kwemamiriro ekunze akaipa, ichisiya Polynesian Air iyo yega inoshanda.
Mutori wedu wenhau muPago Pago anoti kunze kwehuwandu hwevafambi vanhu vazhinji vari kuyedza kuenda kuAmerican Samoa kunogadzwa bhishopi.
Monica Miller anoti mune dzimwe nguva vanhu vari kufanira kubhururuka pamberi pemikwende yavo.
"NemaTwin Otters ari kuenda uye maPolynesia anongova maviri, uye iwe unoziva, kana wauya kune fa'alavelave, sezvatinoidaidza - izvi zvisungo zvetsika - unounza masumbu akakura emameti akanaka uye zvimwe zvekudya."
Monica Miller anoti vafambi ava vanofanira kumirira mazuva akati wandei kuti mikwende yavo isvike.
Hawaii pakupedzisira yakagadzirira kugamuchira vashanyi vanotaura kunze kwenyika kubva kumisika iri kubuda?
Japan neBrazil zvinotarisana neWTM yeKutanga Maketeti Chirongwa